Hlonipha - SANXIA
Ukuhlonishwa nempumelelo yeSanxia eminyakeni yamuva
Ngo-2019, iSanxia iwine indawo yokuqala emabhizinisini ayishumi aphezulu embonini yoqweqwe lwawo yaseChina.
I-Sanxia ithatha ukwakhiwa kwezimboni njengengxenye ehamba phambili, ithuthukisa ngokuqhubekayo umsebenzi osebenzayo kanye nezinga lobuhle bemikhiqizo. Idizayini yethimba layo, futhi ibambisana nabaqambi abaziwayo ekhaya nakwamanye amazwe ukuthuthukisa imikhiqizo, kusuka ekwakhiweni, ekukhiqizeni isikhunta kuya ekukhiqizeni, futhi inamalungelo obunikazi angaphezu kuka-40 kanye nenqwaba yamalungelo obunikazi wokubukeka.
Ukuqamba okusha okwandayo kokuklanywa kwamabhizinisi sekuyinto “enamandla” yokuthuthukisa iSanxia. Umkhiqizo unenani, ubuhlakani abunanani. Ukuqanjwa okusha kweSanxia kulethe isimanga emakethe, futhi umfutho wentuthuko nobungqabavu sebuthuthukiswe kakhulu.
Nge "imbiza yensimbi yokuphonsa edwaleni" eSanxia, ​​inkampani yawina i-German Red Dot Design Award ngo-2020. Umzimba webhodwe ungeze ukwakheka kwe-radian, ngesakhiwo esilula futhi esihle. Vumela umhlaba ubone ukusebenza kwangaphakathi kokuqanjwa kwezimboni kweSanxia.
Ngenkathi enza ubuchwepheshe nobuchwepheshe, uSanxia uhlala ephikelela ngekhwalithi kuqala. Le nkampani isungule uhlelo oluphelele lokulawula ikhwalithi, futhi imikhiqizo yayo isidlulise izivivinyo zobungcweti ze-FDA ne-LFGB.
ISanxia inesikhungo sayo sokuhlola elebhu. Ku-2020, yanikezwa ukugunyazwa kweKomidi Lokuqinisekiswa Kwezwe laseChina lokuhlolwa kokuhambisana (CNAS). Ingazimela ngokuzimela ukuhlolwa kweziqu ze-cast iron koqweqwe lwawo i-kitchenware. Kusukela lapho, iSanxia kitchenware ingakwazi ukuqedela ngokuzimela isitifiketi esigunyaziwe nokuhlolwa kwemikhiqizo, futhi isebenzise i-CNAS Accreditation Mark, uphawu lwe-ILAC-MRA / CNAS, njll., Ngaphandle kokudlula umuntu wesithathu.
Ngokuzayo, uSanxia uzoqhubeka nokunamathela emisha nasentuthukweni, abambelele kukhwalithi kuqala, enze inqubekelaphambili engaguquki emkhakheni wezinto zokupheka, futhi enze impumelelo eningi, futhi adale izitsha zasekhishini ezibaluleke kakhulu nezisezingeni eliphakeme emindenini yomhlaba.
I-Iron Iron Skillet, eqanjwe i-Cast Iron Skillets, i-Cast Iron Skillet enamanzi, i-Iron Iron Skillet engathinti, I-xtreme Iron Skillet, uNamel Skillet,